Accueil > Gazetin'ny nosy > Andry Rajoelina : “Manao hosoka ny CENI ka tsy azo ekena”
Andry Rajoelina : “Manao hosoka ny CENI ka tsy azo ekena”
Omaly alakamisy faha 15 novambra 2108 tamin’ny telo ora tolakandro no tokony hanaovana ny fampitahana ny voka-pifidianana izay nokasain’ny Ceni (Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana) ho tanterahana teny amin’ny foibeny teny Alarobia. Nanasany ny kandidà rehetra izany nefa tsy nisy tonga na dia iray aza izy ireo. Nokasaina hatao teo imason’ny mpanao gazety koa izany.
Raha nanazava ny antony hanaovana izany ingahy Thiery Rakotonarivo izay filoha lefitra ao amin’ny Ceni dia noho ny resabe mandeha etsy sy eroa ataon’ny kandidà sasany fa feno hosoka ny vokatra mivoaka ao amin’ity toerana ity.
Nihazakazaka tokoa ny toe-draharaha taorian’ny fialan’ny solotenan’ingahy Andry Nirina Rajoelina tao amin’ny CENI ny talata faha 13 novambra lasa teo izay nambaran’izy ireo fa misy ny “piratage informatique” na fangalaram-bato atao amin’ny alalan’ny solosaina, ary fanodinkodinana vato avy any amin’ny SRMV(Sampana miandraikitra ny fifidianana) manerana ny distrika maro eto Madagasikara no niantombohan’izany koa.
Mahakasika ity raharaha hosoka amin’ny serasera ity dia nanamafy ingahy Feno Harison izay solotenan’ny kandidà Andry Nirina Rajoelina omaly tetsy amin’ny Ceni rehefa nanatitra taratasy iray izay mangizingizina fa tsy mazava ny vokatra azo avy ao. Vokatra avy aiza? Izany no fanontaniana napetrany. Mandainga hoy izy ny “logiciel” izay ampiasana ato satria manana ny vokatra rehetra manerana an’i Madagasikara ny kandidà Andry Rajoelina nefa tsy mitovy amin’izany ny omena ato amin’ity toerana ity.
Rehefa vita ny fanaterana ny taratasy nataon’izy ireo tao amin’ny biraon’ny Ceni dia lasa izy ireo. Niangavy mafy ity solotenan’ny kandidà Andry Nirina Rajoelina ity ny talen’ny serasera ao amin’ny Ceni ingahy Rakotonirainy Louis de Gonzague, ny hijanonany hanatrika ny fampitahana vokatra izay hokarakarana tamin’io fotoana io, nefa tsy nanaiky izy.
Raha ny zava-nisy teny amin’ny foiben’ny Ceni nefa dia noho ny resaka ataon’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny mpomba azy no tena nanaovana iny fampitahana vokatra iny. Taorian’izay dia tsy nisy ilay fampitahana fa fanazavana tamin’ireo mpanao gazety izay tonga maro teo indray no nataon’ny Ceni.
Tsy vitan’izany ihany koa fa mbola misy ny resaka mandeha fa nandray vola ireto mpiasan’ny Ceni ireto. Efa nandeha tamin’ny tambazotran-tserasera maro izany tamin’ity herinandro ity. Milaza ny mpomba an’ingahy Andry Rajoelina izay tafareka taminay omaly ihany teny amin’ny foiben’ny Ceni fa nisy dia nisy tokoa io fandraisana vola io. Nambarany tamin’izany fa ny alin’ny faha 7 novambra 2018 dia nisy miaramila izay akaiky an’i Andry Rajoelina nefa miasa ao amin’ny Ceni nalefa tany Ambohitsorohitra. Naka vola tamin’ny gony tao ity miaramila ity. Izay voalazan’ny loharanom-baovao hatrany fa mitentina 9 miliara. Nisy koa vola mitovy amin’izany nalaina teny Iavoloha ihany koa araka ny filazana nataony.
Nambaran’ny loharanom-baovao koa fa natao hangalarana mihitsy ny “logiciel” roa novidiana tamin’ny Afrikanina izay ampiasaina amin’izao fotoana izao.
Izany hoy hatrany no tena olana amin’izao fotoana izao ka tokony hitondrana fanazavana.
Lasa resaka ny moana sy marenina ity raharaha ity raha ny fahitanay azy. Tsy hanaiky na oviana ny fanazavana omen’ny CENI ireo mpomba an’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Ho an’ingahy Andry Nirina Rajoelina dia manamafy ny mpomba azy fa mandresy amin’ny fihodinana voalohany izy ireo. Ny Ceni indray milaza fa tsy misy miova ny vokatra avy any amin’ny SRMV, ary tsy manana fahefana mikitika voka-pifidianana izy ireo satria fahefan’ny HCC (Fahefana avo momba ny lalàmpanorenana) ihany izany.
Mihahenjana sy mihasarotra ny raharaha ka ho hitantsika eo ihany ny ho tohiny.